Volambita - Wikipedia
Ny Volambita dia iray amin' ireo volana ao amin' ny tetiandro malagasy ahitana volana mitondra anarana amin' ny teny sanskrita. Misy ny milaza fa volana voalohany ao amin' ny faritra nampiasa anaram-bolana avy amin' ny fiteny sanskrita io Volambita io, nefa misy koa ny milaza zavatra hafa tsy mitovy amin' izay. Marihina fa tsy anaram-bintana ny Volambita fa anaram-bolana. Misy koa ny manonona hoe Volambitabe.
1 Fotoana tondroina amin'ny anarana hoe Volambita
1.1 Laharan'ny Volambita ao amin'ny tetiandro malagasy
1.2 Volana malagasy amin' ny teny arabo mifanandrify amin' ny Volambita
2 Fankalazana taom-baovao amin'ny lohataona
2.1 Fotoam-pankalazana ny taom-baovao lohataona
2.2 Fanamarinana ara-pitenenana sy ara-boajanahary
3 Ohabolana momba ny Volambita
4.1 Anaram-bolana malagasy avy amin'ny teny sanskrity:
4.2 Anaram-bolana malagasy avy amin'ny teny arabo:
Fotoana tondroina amin'ny anarana hoe VolambitaHanova
Laharan'ny Volambita ao amin'ny tetiandro malagasyHanova
Tsy tokana ny laharan' ny Volambita (sy ny volana hafa rehetra miaraka aminy) fa miovaova isam-paritra na arakaraka ny mpilaza. Misy ny milaza fa volana voalohany ao amin' ny taona izy satria mifanandrify amin' ny lohataona. Ireo izay mankalaza taom-baovao malagasy lohataona dia nanapaka fa amin' ny 22 Septambra no anombohan' izany volana Volambita izany. Ny fankalazana ny fiandohan' ny lohataona dia lazan' izy ireo fa natao tamin' ny faritra maro teto Madagasikara. Misy ny milaza fa volana faha-11 izy.
Ny Volambita sakalava koa dia tsy voatery hifanandrify tanteraka amin' ny Volambita antandroy na Volambita betsileo. Ny volana rehetra ao amin' ny lohataona dia nety natao Volambita tamin'ny fotoana faha mpanjaka, araka ny voasoratry ny mpahay tantara. Samy ao anaty lohataona ny Volambita samihafa fa tsy amin'ny fizaran-taona samy hafa.
Tsy manondro fari-potoana tokana ny anarana hoe Volambita sady tsy volana voalohany ao amin' ny taona ny Volambita amin' ny faritra rehetra eto Madagasikara: ao amin' ny foko tambahoaka sy bezanozano dia anaran' ny volana faha-11 ny Volambita, fa ao amin'ny foko bara kosa dia mifanandrify amin' ny volana Aogositra izany; ny Sihanaka sy ny Antanosy kosa dia manao ny Volambita ho volana faha-8 (Rakotosaona, 1972). Volana manan-danja indrindra ny Volambita (misabaka amin' ny volana Septambra sy Oktobra) any amin' ny faritra atsimo atsinanan' i Madagasikara. Volana voalohany ny Volambita ao amin' ny foko betsimisaraka, izay manitsaka ny volana Septambra sy Oktobra, ka eo no anombohan' ny fotoam-pambolena. Amin' ny Antefasy dia volana fahafolo ny Volambitabe (Rakotosaona, 1972).
Volana malagasy amin' ny teny arabo mifanandrify amin' ny VolambitaHanova
Raha manara-bolana sy masoandro tokoa ny tetiandro malagasy mampiasa ny anaran'antokon-kintana avy amin' ny teny arabo dia volana tokana na roa mifanarakaraka tsy miova no mifanandrify amin' ny Volambita. Araka ny filazan' ny sasany dia ny volana Adimizana no mifanandrify amin' ny Volambita. Misy koa anefa ny milaza fa ny volana Adalo no mifanandrify amin' izany. Raha manara-bolana fotsiny ny tetiandro malagasy mampiasa ny anaram-bolana amin' ny teny arabo dia miovaova ny volana mifandrify amin' ny Volambita fa tsy raikitra ka tsy miverina ny fifanandrifiana raha tsy afaka 33 taona gregoriana.
Fankalazana taom-baovao amin'ny lohataonaHanova
Talohan'ny taona 2016 dia efa nisy ny nanao fankalazana ny taombaovao lohataona tao Antananarivo. Nanomboka tamin' ny taona 2016 dia nisy ny fankalazana taom-baovao malagasy iraisam-paritra izay atao amin' ny volana Septambra ka tapaka fa amin' ny tsinam-bolan' ny Septambra no anatanterahana izany. Nanapaka ireo mpankalaza taom-baovao lohataona, taty aoriana, tamin' ny taona 2018, fa ankalazaina isaky ny 22 Septambra ny taom-baovao malagasy ho an' ny faritra rehetra eto Madagasikara. Io volana Septambra io dia iray amin' ireo volana ao amin' ny fizaran-taona lohataona. Natao hoe Volambita rahateo ity vaninandro ity.
Araka ireo mpankalaza taom-baovao malagasy lohataona dia atao hoe Volambita ny fiantombohan' ny lohataona any amin' ny faritra maro eto Madagasikara izay nampiasa ny anaram-bolana amin' ny teny sanskrita. Tsy vao tamin' io taona 2018 io tsy akory, hoy izy ireo, no nanombohan' ny Malagasy nankalaza ny taom-baovao lohataona.
Fanamarinana ara-pitenenana sy ara-boajanaharyHanova
Kankafotra (siantifika: Coculus rochii)
Milaza ny mpankalaza taom-baovao lohataona fa ny fiandohan' ny lohataona no tena taom-baovao malagasy satria miandoha na manomboka eo ny taona. Amin' ny maha fotoana fiandohan' ny taona azy indrindra, hoy izy ireo, no nanomezan' ny Ntaolo malagasy azy ny anarana hoe lohataona (misy koa ny manao hoe lohatao na lohataogno). Mbola hita taratra ao amin' ny anaran' ilay vorona atao hoe taotaonkafa, kankafotra na taotaokafo (anarana ara-tsiansa: Cuculus poliocephalus rochii), izay ataon' ny Ntaolo malagasy fa manambara ny fahatongavan' ny taona hafa, izany hoe taona vaovao izany, rehefa maneno amin' ny fiandohan' ny lohataona. Hita amin' ny angano izany ary hita koa amin'ny ohabolana sy ny fitenenana maro  ary ny tononkalo na hainteny tranainy na vaovao.
Kankafotra na Taotaonkafa (siantifika: Coculus rochii)
Ohabolana momba ny VolambitaHanova
Marary volambita, velon-tsaramantsina: tsy olo-marary fa malain-kiasa.
Anaram-bolana malagasy avy amin'ny teny sanskrity:Hanova
Hatsiha - Volasira - Faosa - Volamaka - Hiahia - Sakamasay - Volambita - Sakave - Asaramantsina - Asaramanitra - Asotry - Vatravatra.
Anaram-bolana malagasy avy amin'ny teny arabo:Hanova
"Volambita : La fête du « Fihavanana »", MidiMadagascar, 31 Août 2017.
"« Volambita »: Un « Asaramanitra » très éclectique !", MidiMadagascar, 25 Septembre 2017.
Valeur culturelle: « Volambita », pour la relance du Fihavanana malagasy, News Mada.
"1ère partie: Volambita célèbre le début du printemps austral", ActuTana, 25 Septembre 2017.
"Months in different malagasy dialects", in Gwyn Campbell, David Grifith and the Missionary "History of Madagascar", 2012, p. 478.
Rakotosaona, Rakibolana, 1972/1975 (tsy voatonta).
Deschamps Hubert, Le dialecte Antaisaka, Imprimerie Moderne de l'Emyrne. 1936.
Richardson James (Rev.), A New Malagasy-English Dictionary, The London Missionary Society, Antananarivo, 1885. Reprinted in 1967 by Gregg Press Limited, 1 Westmead, Farnborough, Hants., England, 1885
William Ellis, History of Madagascar: Comprising Also the Progress of the Christian Mission Established in 1818 ..., 1838.
Constant Hamès (dir.), Coran et talisman, textes et pratiques magiques en milieu musulman, Karthala, 2007.
↑ Wiktionary, "Volambita".
↑ "Volambita", in Dictionnaire malgache et Encyclopédie
↑ Hilde Nielssen, Ritual Imagination: A Study of Tromba Possession among the Betsimisaraka in Eastern Madagascar, 2011, p. 140.
↑ "Volambitabe", in Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an'i Madagasikara
↑ "Le calendrier malgache" iCalendrier.fr
↑ "Taom-baovao iraisan’ny Malagasy rehetra Nankalazaina teny Ambohimanga, omaly" - Tia Tanindrazana
↑ "Le vintsy et le kankafotra" ao amin'ny Agir avec Madagascar
↑ "Ohabolana misy teny hoe kankafotra", in Ohabolana.org
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Volambita&oldid=997924"
Dernière modification le 10 Oktobra 2020, à 19:14
Voaova farany tamin'ny 10 Oktobra 2020 amin'ny 19:14 ity pejy ity.